ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် အကောင်းဆုံး စာဖတ်အစီအစဉ်ရှိပါသည်။
I Can Read သည် အဘယ်ကြောင့် ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး စာဖတ်အစီအစဉ်တစ်ရပ်ဖြစ်နေပါသနည်း။ I Can Read သည် အဘယ်ကြောင့် မိဘများက ရွေးချယ်ကြသည့် စနစ်ဖြစ်နေပါသနည်း။
သင်ခန်းစာများကို ဖတ်ရှုရန်အတွက် လမ်းညွှန်ချက်ပါရှိသော ကောင်းမွန်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုသည် အသံများကို ပေါင်း စပ်ပြီး စကားလုံးများဖန်တီးရာတွင်ရှိနေသည့် သဘောတရားကို ရှင်းလင်းပြတ်သားစေပါလိမ့်မည်။ အသံများကို တိကျစွာ အသုံးပြုခြင်းက အသံထွက်ကို ပိုမိုရှင်းလင်းစေကြောင်း ကျောင်းသားများကို သင်ကြားပေးပါလိမ့်မည်။
အချို့တို့သည် စာဖတ်ရှုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး အဘယ်ကြောင့် အခက်အခဲရှိနေပါသနည်း။
ကလေးသူငယ်များစွာတို့သည် အဘယ်ကြောင့် စာဖတ်ရာတွင် အခက်အခဲများရှိရသည်နှင့်စပ်လျဉ်းပြီး ပံ့ပိုးနေသည့် အချက်အလက်ပေါင်းများစွာရှိနေပါသည်။ ထိုအချက်အလက်များကို လက်မှတ်ရစိတ်ပညာရှင်များနှင့် I Can Read စတင် တည်ထောင်သူများဖြစ်ကြသည့် အန်ထော်နီအန်းရှောနှင့် အယ်နာဘဲလ် ဆားဂျင့်တို့ရေးသားပြီး Pearson Education က ထုတ်ဝေသည့် Dealing with Dyslexia and Other Reading Difficulties ဟူသောစာအုပ်တွင် အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြ ထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်သည်ကို ကျွန်ုပ်တို့အဘယ်ကြောင့်နှစ်သက် မြတ်နိုးကြပါသနည်း?
I Can Read တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူလဦးတည်ချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျောင်းသားများသည် မိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံ ကြည်စိတ်ချမှုရှိသော အမှီ အခို
ကင်းသည့် စာဖတ်သူများအဖြစ်သို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေလျက် စာဖတ်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခက်အခဲများကိုကျော်လွှား
ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်ရှုခြင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက I Can Read ကျောင်းသားများကို သူတို့၏စာတတ်မြောက်မှု ခရီးလမ်းပေါ်
တွင် လိုအပ်သောမှတ်တိုင်များအားလုံးတို့ထံ အရောက်သွားရန်အ တွက် တတ်စွမ်းနိုင်စေလိုပါသည်။ ရက်သတ္တပတ်တစ်ပတ်ပြီးတစ်ပတ် ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိတို့၏ ကျောင်းသားများ စာဖတ်ခြင်း၊ စာရေးခြင်း၊ စာလုံးပေါင်းသတ်ပုံနှင့် စကားပြောစွမ်းရည်များ မိမိတို့၏တမူထူးခြား လှသော နည်းလမ်းများ၏ အထောက်အကူဖြင့် တိုးတက်လာသည်ကို စောင့်ကြည့်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါမှတ်တိုင်များဆီသို့ မဆုတ်မနစ်မှုဟူသော
အခြေခံအုတ်မြစ်အပေါ်တွင် မည်သို့သောအားဖြင့် ရောက်ရှိလာပါသ နည်း?
ကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိတို့၏ စာတတ်မြောက်မှုဆိုင်ရာ မှတ်တိုင်များသို့ I Can Read စနစ်တွင်ပါရှိသော နည်းစနစ်ကျသည့်ပုံစံ၏ကျေးဇူးဖြင့် ရောက်ရှိပါသည်။ စာဖတ်ရှုခြင်းသို့ ချဉ်းကပ်မှုပုံစံ အားလုံးနီးပါးတို့နှင့် မတူညီဘဲ ကောင်းစွာစီမံခန့်ခွဲထားသည့် သုတေသန၊ အထူးသဖြင့် ဘာသာစကားသိပ္ပံအပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ် ရှုရေးအစီအစဉ်များကို ကလေးသူငယ်စိတ်ပညာရပ်နှင့် အင်္ဂလိပ်စာ ဆိုင်ရာ တစ်ဆယ့်ငါးနှစ်တာ နက်ရှိုင်းသောသုတေသနပြုမှုတို့ဖြင့် လည်းပံ့ပိုးထား ပါသည်။
ဤအချက်က ကျွန်ုပ်တို့ကို မဆုတ်မနစ်သောရလဒ်များပေးပြီး ထို
အကြောင်းကြောင့်ပင် ကျောင်းသားပေါင်း ၁၇၀,၀၀၀ ကျော်တို့က I Can Read သင်တန်းကိုအသုံးပြုပြီး စာဖတ်တတ်ရန် သင်ယူခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။